Sidee loo xiraa vfxAlert iyo farriinta telegram? | vfxAlert official blog
Sidee loo sameeyaa botfgram telefishanka vfxAlert?
Haddii aad rabto inaad hesho calaamadaha meel kasta oo aad ka ganacsato meel kasta oo aad rabto, waxaad ku xidhi kartaa vfxAlert telegram messenger oo waxaad ku heli kartaa calaamadaha qalabkaaga (casriga ama kiniinka). Si tan loo sameeyo waxaad ku dejin kartaa botgramka telegram-ka koontadaada gaarka ah. Si tan loo sameeyo, raac tilmaamaha fudud oo daawo fiidiyowgaan.
1. Fur koontadaada. Dhagsii astaanta xisaabta shakhsiga ah oo xulo qaybta Telegram.
2. Halkan waxaad ka heli doontaa calaamadda. Token waa furaha elektarooniga ah ee telegramka oo ah qaab isku xigxiga astaamo aan kala sooc lahayn. Token ayaa kugu xiri doonta telegram.
3. Guji calaamadda u dhow calaamadda. Kadib, dhagsii qoraalka @to_vfxAlert_Bot.
4. Kadib, waxaad arki doontaa calaamada telefishanka vfxAlert. Dhagsii Telegram-ka Furan.
5. Telegram bot wuxuu furi doonaa. Qeybta hoose ee shaashadda waxaad ku arki doontaa dhowr amar. Bot ayaa ku siin doona inaad doorato amarka. Guji Bilow.
6. Bot wuxuu ku weydiin doonaa inaad geliso calaamadaada. Nuqul calaamadda khadka.
7. Hadda bot wuxuu kuxiran yahay koontada vfxAlert. Hadda waxaad u baahan tahay inaad doorato noocyada calaamadaha aad rabto inaad hesho. Waxaad aadi kartaa koontada oo aad dejin kartaa hantida lagama maarmaanka ah, algorithm, awoodda iyo dhicitaanka. Haddii aad rabto inaad hesho calaamadaha dhammaan lamaanaha lacagta, calaamadee dhammaan qeexitaannada.
8. Guji guji cusboonaysiinta si aad u dejiso qeexitaannada la doortay. Dejintaada waa la cusboonaysiiyay
9. Kadib, u tag botgramka telegram oo guji Start. Hada bot-kaaga waa la bilaabay. Waxaad arki doontaa lammaanaha lacagta leh algorithm, heerka awoodda iyo waqtiga dhicitaanka ee aad dooratay. Tani waa calaamadda. Hadda waxaad ka ganacsan kartaa qalabkaaga meel kasta.
10. Si aad ugala baxdo bot-ka telegramka, tag koontada shakhsi ahaaneed oo guji qaybta hoose "Drop connection".
Haddii aad rabto inaad wax badan ka ogaato calaamadaha, aqri qaybta " Sidee u shaqeysaa ".